နစေ့ဉျဘဝမှာ Minimalism (သငျ့တငျ့လြောကျပတျခွငျး) ဆိုတာကို နားရညျဝနကွေမယျထငျပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေလို နညျးပညာတှတေိုးတကျလာတဲ့အခါမှာ လိုအပျတာထကျပိုတဲ့သုံးစှဲမှုတှေ၊ ငှကွေေးကုနျကမြှုတှေ မြားလာပါတယျ။ ဉပမာ- အိမျတဈအိမျရဲ့မီးဖိုခြောငျမှာဆို အဝတျလြျောစကျ၊ထမငျးပေါငျးအိုး၊မီးဖိုတဈခု ဆိုလုံလောကျပမေယျ့ အခွားသော မုနျ့ဖုတျစကျ၊ ပေါငျမုနျ့မီးကငျစကျ၊ air fryer(အခွောကျကွျောစကျ) အစရှိသဖွငျ့ အသုံးအဆောငျအပိုတှကေို ဝယျယူသုံးစှဲလာကွတာမြိုးပါ။
ဒါဆို Minimalism Lifestyle ဆိုတာကို စာဖတျပရိသတျ အနညျးငယျရိပျမိပွီလို့ ထငျပါတယျ။ Minimalism Lifestyle ( သငျ့တငျ့လြောကျပတျစှာနထေိုငျခွငျး ) ဆိုတာ လိုအပျတာထကျပိုတဲ့ လိုအငျဆန်ဒတှကေို ခြိုးနှိမျနထေိုငျခွငျး ကို ဆိုလိုတာပါ။ Minimalism Lifestyle ( သငျ့တငျ့လြောကျပတျစှာနထေိုငျခွငျး ) ဆိုတဲ့ စကားက နားထောငျလို့ကောငျးပမေယျ့ တကယျလုပျကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ မလှယျတဲ့အရာပါ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ပတျဝနျးကငျြမှာက လိုခငျြစရာတှပွေညျ့နပွေီး ထို လိုခငျြစရာတှကေို မလိုခငျြအောငျ ခြိုးနှိမျရခွငျးက စိတျနဲ့အားပွိုငျရခွငျးတဈမြိုးဖွဈတာကွောငျ့ တျောတျောမလှယျကူတဲ့ကိစ်စပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျက Minimalist တဈယောကျဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ သငျ အသကျရှငျနတေဲ့နရေ့ကျတိုငျးက သငျ့အဖို့ ပိုအဓိပ်ပာယျရှိလာပွီး ပိုနလေို့ကောငျးလာမှာပါ။ ဒီတော့ သငျက Minimalism Lifestyle ကိုနှဈသကျသူလား? ဒါဆို ဒီအခကျြ(၈)ခကျြနဲ့ Minimalist တဈယောကျအဖွဈ သငျ့ကိုယျသငျ ပွောငျးလဲလိုကျပါ။
(၁) သငျ့ရဲ့ကိုယျပိုငျသတျမှတျခကျြတဈခု ခပြါ။
Minimalism ကို လူအမြားရဲ့ယူဆခကျြတှကေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတူညီကွပါ။ တခြို့က သူလိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတခြို့ ရှိရငျရပွီလို့သတျမှတျကွပါတယျ။ တခြို့ကကသြော ဒီကမ်ဘာကွီးမှာ သူတို့နလေို့ရတဲ့ နရောသေးသေးလေးတဈခုဖွဈနပေါစေ၊ အဲ့နရောလေးမှာပဲ အဆငျပွအေောငျ ပြျောပြျောရှငျရှငျနထေိုငျခွငျး လို့ယူဆကွပါတယျ။ အဲ့တာကိုက Minimalism ရဲ့အလှတရားတဈခုပါ။ အရာရာကို အကောငျးမွငျပွီး အပူကငျးနှလုံးငွိမျစှာနထေိုငျခွငျးပါ။ ဒါကွောငျ့ သငျလညျး Minimalism ဆိုတာကို သငျ့စိတျတိုငျးကြ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။ ဉပမာ- သငျ့ဘဝမှာ နစေရာအိမျခနျးလေးတဈခု၊ အလုပျတဈခု၊ မိဘမောငျနှမ တှရှေိရငျတျောပွီ။ ဒီလိုမြိုးတှေ သငျသတျမှတျနိုငျပါတယျ။ Minimalism နဲ့ပတျသကျတဲ့ စကားလေးတဈခှနျးရှိပါတယျ။
“သငျ့တငျ့လြောကျပတျတဲ့ရကေူးကနျထဲမှာဇိမျခံလထေိုးဘောလုံးတှရှေိနဖေို့မလိုပါဘူး။ ရကေနျထဲမှာ ခွခြေောငျးလေးတှစေိမျနရေရငျကို အဆငျပွပေါတယျ” တဲ့။
Minimalist တဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျအရေးကွီးတဲ့ ကဏ်ဍတဈခုလို့ဆိုခငျြပါတယျ။ အိမျတိုငျးအိမျတိုငျးလိုလိုက အမွဲရှုပျပှနတေတျပါတယျ။ ဒါက ဝနျခံရခကျတဲ့အမှနျတရားတဈခုပါ။ ဒါပမေယျ့ Minimalist တဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ ဒါကိုပထမဦးဆုံးတှနျးလှနျရပါမယျ။ အိမျတဈအိမျရှုပျနရေခွငျးက မလိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှမြေားနလေို့ပါ။ ဒီတော့ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးလောကျလေးနဲ့ သနျ့ရှငျးသပျရပျစှာနထေိုငျခွငျးနဲ့ စတငျလိုကျပါ။
(၃) လိုမှသုံး အပိုမထားနဲ့။
Minimalist တဈယောကျအတှကျ ဖိနပျတဈရံရှိရငျ လုံလောကျပါပွီ။ ကိုယျ့မှာ လိုအပျတဲ့အရာတဈခုရှိရငျ အဲ့တဈခုနဲ့ ရပျတညျနိုငျအောငျ ကွိုးစားခွငျးက Minimalism ပါ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့စိတျထဲမှာ “လိုမှသုံး အပိုမထားနဲ့” ဆိုတဲ့အတှေးကို စှဲနအေောငျမှတျထားပါ။ ဒါက သငျ့ကို Minimalist တဈယောကျဖွဈဖို့ အကောငျးဆုံးခှနျအားပေးပါလိမျ့မယျ။
(၄) ပစ်စညျးတှကေို အရအေတှကျနဲ့သခြောထားပါ။
ဆိုလိုခွငျးက သငျ့အိမျမှာလူ၃ယောကျရှိရငျ မကျြနှာသုတျပုဝါ (၃) ခုရှိရငျလုံလောကျပါပွီ။ အပို(၁) ထညျရှိနရေငျ သငျ တဈထညျပိုလြှျောရပါလိမျ့မယျ။ တဈထညျစာ အိမျမှာနရောပေးနရေပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့အိမျမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို တတျနိုငျသမြှ သခြော စုပေါငျးရတှေကျထားပါ။ ဒီစကားက သငျ့အတှကျ ဆနျးကောငျးဆနျးနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့က Minimalist တဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျဆိုရငျ သငျသတိထားဆောငျရှကျရမယျ့ အခွခေံအခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။
(၅) ခကျခဲတဲ့မေးခှနျးတှကေို သငျ့ကိုယျသငျအမွဲမေးပါ။
တဈခါတဈလမှော လူဆိုတာက မလိုအပျမှနျးသိတယျ။ ဒါပမေယျ့ တအားလိုခငျြတယျ ဆိုတဲ့စိတျတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ဒါလူတိုငျး ကွုံတှကွေ့ရတာပါ။ Minimalism သမားတှလေညျး ကွုံကွရပါတယျ။
(၁) ဒါကတကယျအသုံးလိုတာလား။ အသုံးဝငျမှာလား။
(၃) ဒါကို ငါယူလိုကျလို့ ငါတကယျပြျောမှာလား။
ဒီမေးခှနျးတှကေို ဖွတေဲ့အခါတော့ စဈမှနျတဲ့အဖွတှေကေို သငျဖွနေိုငျဖို့တော့လိုပါတယျ။
(၆) နညျးနညျးပဲ ယူပါ။
ဒီအခကျြကတော့ရှငျးပါတယျ။ သငျ့ဘဝမှာ သငျလိုအပျတာတှပေဲ သငျရှေးခယျြပွီးနတေယျဆိုရငျတော့ သငျ့မှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှကေ နညျးကိုနညျးနမှောပါ။ Minimalism Lifestyle မှာနတေဲ့လူတျောတျောမြားမြားက သူ့အတှကျတကယျလိုအပျတဲ့အရာတှကေိုပဲ အပိုမရှိ နညျးနညျးပဲအသုံးခနြထေိုငျကွတာဖွဈပါတယျ။
Minimalist တဈယောကျဖွဈခွငျးက ဘဝမှာ ဦးစားပေးလိုအပျခကျြ( Minimalism Needs ) တှနေဲ့သာ ရှငျသနျနရေတာမလို့ သူ့အတှကျ မလိုအပျတဲ့အတှေးဆိုးတှေ၊ ပတျဝနျးကငျြဆိုးတှေ၊ အိပျမကျဆိုးတှမေရှိဘဲ သဘာဝတရားနဲ့ ဘဝအလှတရားကို နှလုံးငွိမျအေးစှာရှာဖှနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
နေ့စဉ်ဘဝမှာ Minimalism (သင့်တင့်လျောက်ပတ်ခြင်း) ဆိုတာကို နားရည်ဝနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်လို နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့သုံးစွဲမှုတွေ၊ ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေ များလာပါတယ်။ ဉပမာ- အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့မီးဖိုချောင်မှာဆို အဝတ်လျော်စက်၊ထမင်းပေါင်းအိုး၊မီးဖိုတစ်ခု ဆိုလုံလောက်ပေမယ့် အခြားသော မုန့်ဖုတ်စက်၊ ပေါင်မုန့်မီးကင်စက်၊ air fryer(အခြောက်ကြော်စက်) အစရှိသဖြင့် အသုံးအဆောင်အပိုတွေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲလာကြတာမျိုးပါ။
ဒါဆို Minimalism Lifestyle ဆိုတာကို စာဖတ်ပရိသတ် အနည်းငယ်ရိပ်မိပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ Minimalism Lifestyle ( သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေထိုင်ခြင်း ) ဆိုတာ လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ချိုးနှိမ်နေထိုင်ခြင်း ကို ဆိုလိုတာပါ။ Minimalism Lifestyle ( သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေထိုင်ခြင်း ) ဆိုတဲ့ စကားက နားထောင်လို့ကောင်းပေမယ့် တကယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မလွယ်တဲ့အရာပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာက လိုချင်စရာတွေပြည့်နေပြီး ထို လိုချင်စရာတွေကို မလိုချင်အောင် ချိုးနှိမ်ရခြင်းက စိတ်နဲ့အားပြိုင်ရခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် တော်တော်မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် သင်က Minimalist တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ သင် အသက်ရှင်နေတဲ့နေ့ရက်တိုင်းက သင့်အဖို့ ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလာပြီး ပိုနေလို့ကောင်းလာမှာပါ။ ဒီတော့ သင်က Minimalism Lifestyle ကိုနှစ်သက်သူလား? ဒါဆို ဒီအချက်(၈)ချက်နဲ့ Minimalist တစ်ယောက်အဖြစ် သင့်ကိုယ်သင် ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
(၁) သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ချပါ။
Minimalism ကို လူအများရဲ့ယူဆချက်တွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီကြပါ။ တချို့က သူလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတချို့ ရှိရင်ရပြီလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ တချို့ကကျသော ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ သူတို့နေလို့ရတဲ့ နေရာသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါစေ၊ အဲ့နေရာလေးမှာပဲ အဆင်ပြေအောင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခြင်း လို့ယူဆကြပါတယ်။ အဲ့တာကိုက Minimalism ရဲ့အလှတရားတစ်ခုပါ။ အရာရာကို အကောင်းမြင်ပြီး အပူကင်းနှလုံးငြိမ်စွာနေထိုင်ခြင်းပါ။ ဒါကြောင့် သင်လည်း Minimalism ဆိုတာကို သင့်စိတ်တိုင်းကျ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဉပမာ- သင့်ဘဝမှာ နေစရာအိမ်ခန်းလေးတစ်ခု၊ အလုပ်တစ်ခု၊ မိဘမောင်နှမ တွေရှိရင်တော်ပြီ။ ဒီလိုမျိုးတွေ သင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Minimalism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။
“သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ရေကူးကန်ထဲမှာဇိမ်ခံလေထိုးဘောလုံးတွေရှိနေဖို့မလိုပါဘူး။ ရေကန်ထဲမှာ ခြေချောင်းလေးတွေစိမ်နေရရင်ကို အဆင်ပြေပါတယ်” တဲ့။
Minimalist တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းလိုလိုက အမြဲရှုပ်ပွနေတတ်ပါတယ်။ ဒါက ဝန်ခံရခက်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် Minimalist တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဒါကိုပထမဦးဆုံးတွန်းလှန်ရပါမယ်။ အိမ်တစ်အိမ်ရှုပ်နေရခြင်းက မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေများနေလို့ပါ။ ဒီတော့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလောက်လေးနဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ စတင်လိုက်ပါ။
(၃) လိုမှသုံး အပိုမထားနဲ့။
Minimalist တစ်ယောက်အတွက် ဖိနပ်တစ်ရံရှိရင် လုံလောက်ပါပြီ။ ကိုယ့်မှာ လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိရင် အဲ့တစ်ခုနဲ့ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းက Minimalism ပါ။ ဒါကြောင့် သင့်စိတ်ထဲမှာ “လိုမှသုံး အပိုမထားနဲ့” ဆိုတဲ့အတွေးကို စွဲနေအောင်မှတ်ထားပါ။ ဒါက သင့်ကို Minimalist တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အကောင်းဆုံးခွန်အားပေးပါလိမ့်မယ်။
(၄) ပစ္စည်းတွေကို အရေအတွက်နဲ့သေချာထားပါ။
ဆိုလိုခြင်းက သင့်အိမ်မှာလူ၃ယောက်ရှိရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ (၃) ခုရှိရင်လုံလောက်ပါပြီ။ အပို(၁) ထည်ရှိနေရင် သင် တစ်ထည်ပိုလျှော်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ထည်စာ အိမ်မှာနေရာပေးနေရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှ သေချာ စုပေါင်းရေတွက်ထားပါ။ ဒီစကားက သင့်အတွက် ဆန်းကောင်းဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်က Minimalist တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် သင်သတိထားဆောင်ရွက်ရမယ့် အခြေခံအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေကို သင့်ကိုယ်သင်အမြဲမေးပါ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ လူဆိုတာက မလိုအပ်မှန်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် တအားလိုချင်တယ် ဆိုတဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါလူတိုင်း ကြုံတွေ့ကြရတာပါ။ Minimalism သမားတွေလည်း ကြုံကြရပါတယ်။
(၁) ဒါကတကယ်အသုံးလိုတာလား။ အသုံးဝင်မှာလား။
(၃) ဒါကို ငါယူလိုက်လို့ ငါတကယ်ပျော်မှာလား။
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေတဲ့အခါတော့ စစ်မှန်တဲ့အဖြေတွေကို သင်ဖြေနိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
(၆) နည်းနည်းပဲ ယူပါ။
ဒီအချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ သင်လိုအပ်တာတွေပဲ သင်ရွေးချယ်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေက နည်းကိုနည်းနေမှာပါ။ Minimalism Lifestyle မှာနေတဲ့လူတော်တော်များများက သူ့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပဲ အပိုမရှိ နည်းနည်းပဲအသုံးချနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Minimalist တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းက ဘဝမှာ ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်( Minimalism Needs ) တွေနဲ့သာ ရှင်သန်နေရတာမလို့ သူ့အတွက် မလိုအပ်တဲ့အတွေးဆိုးတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးတွေ၊ အိပ်မက်ဆိုးတွေမရှိဘဲ သဘာဝတရားနဲ့ ဘဝအလှတရားကို နှလုံးငြိမ်အေးစွာရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။